Wedzera LinkedIn Kambani Tevedzera Bhatani | Martech Zone
Chipiri, February 28, 2012 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Ini ndinonyatsoda chokwadi chekuti LinkedIn iri kuve inonakidza bhizinesi-yakavakirwa pasocial media chikuva. Kune bhizinesi kune bhizinesi (B2B) vatengi nevatengesi, anotevera makambani munharaunda paLinkedIn anogona kukupa iwe ruzivo rwakakura pamusoro pezvigadzirwa zvavo, masevhisi uye ruzivo rweindasitiri. Paunowana mukana, iwe unofanirwa kukopa iyo LinkedIn nharembozha maapplication zvakare - iko kugadziridza kwakanaka kwealgorithm yavo yekutsvaga kumusoro kwepamusoro uye misoro mukati mebhizimusi network yako yakatanhamara.
LinkedIn ikozvino inopa bhatani kuti nhengo dzitevere bhizinesi rako:
Ingotanga kutaipa rako Kambani Zita muzita ravo bhatani uye sarudza iyo kubva kune auto-yakazara kudonhedza. Kana usipo, ungangoda kugadzira chimiro chekambani… inokurudzirwa kwazvo!
Iwe unogona kuona bhatani mukuita pane yedu pasocial media agency saiti. Ive neshuwa yekutitevera!
Tags: LinkedInlinkedin kambanilinkedin mugadzirilinkedin teveralinkin tevera bhatanilinkedin mune matipi
Yemunyori Plugin yeWordPress